Saxaraha Galbeed - Wikipedia
Calanka saxaraha Galbeed
Saxaraha Galbeed Waa maamul kuyaala Galbeedka Afrika waxa uu maamulkani haystaa maamul hoosaad waxa uu markii hore ka mid ahaan jiray boqortooyada Maroko lakin hada waxa uu haystaa madax banaani xadidan ilaa sanadii 1976 waxana gacanta kuhaysa jabhada looyaqaano Polisario oo dagaal la gashay wadanka maroko shacabka kunool saxaraha galbeed waxa ay rabaan ictiraaf iyo madaxbanaani buuxda. saxaraha galbeed maamulka saxaraha galbeed waxa uu xubin kayahay Midowga afrika . waxa la ogsoonyahay in midawga afrika aykabaxaday dawlada maroko kadib markii maamulka saxaraha galbeed lasiiyay xubin joogto aha, saxaraha galbeed waxa uu qayb ka ahaa dhulkii ay gumaysanjirtay boqortooyadii isbayn.
Galbeedka Sahara (/ - səhɑːrə, -hærə / (Ku dhawaad ​​codka dhegaysiga); Carabi: الصحراء الغربية aṣ-Ṣaḥrā 'al-Gharbīyah, luqadaha Berber: Taneẓroft Tutrimt, Spanish iyo Faransiis: Sahara Occidental) Xuduuda Gobolka Maghreb ee Waqooyiga Afrika, oo qayb ahaan ay gacanta ku hayaan Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Sahrawi iyo qayb ahaan Morocco, oo xuduud u leh Morocco oo ku habboon waqooyiga, Aljeeriya woqooyi, Mauritania ilaa bari iyo koonfur, iyo Badweynta Atlantic xagga galbeed. Goobta dusha sare waxay u dhigantaa 266,000 kilomitir square (103,000 sq m). Waa mid ka mid ah dhulalka ugu caansan ee ku nool adduunka, oo badiba ka kooban dhulalka dhulgariirka. Dadweynaha waxaa lagu qiyaasay in ka badan 500,000, taas oo ku dhawaad ​​40% ku noolaa magaalada Laayoune, oo ah magaalada ugu weyn ee galbeedka Sahara. Isagoo kaashanaya Spain ilaa qarnigii 20aad, Galbeedka Galbeedka wuxuu ku jiray liiska Qaramada Midoobay ee dhulal aan dawli ahayn tan iyo 1963 markii uu dalbaday Morocco. Waa dalka ugu badan ee ku yaal liiskaas, iyo illaa inta ugu badan ee degaanka. 1965-kii, Golaha Guud ee QM ayaa ansixiyay go'aankii ugu horreeyay ee Sahra Galbeed, isaga oo Spain weydiistay inuu xayiraad ku soo celiyo dhulka. Hal sanno ka dib, xal cusub ayaa la ansaxiyay Golaha Guud oo codsanaya in afti loo qaado af-soomaaliga oo is-xukun leh. Sanadkii 1975kii, Spain waxay ka tanaasushay xukunka maamul ee dhulka si ay u maamulaan maamul ay wadaagaan Morocco (kuwaas oo si rasmi ah u sheegtay dhulkii ilaa 1957) iyo Mauritania Dagaal ayaa ka qarxay dalalkaas iyo dhaqdhaqaaqa millatari ee Sahrawi, oo ka tirsan Ciidamadda Booliska, kaas oo ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Sahrawi (SADR) oo ay dawladdu kula wareegtay masaafurintii Tindouf, Algeria. Mauritania waxay sheegatay sheegashadeeda 1979-kii, Morocco waxay ugu dambeyntii xaqiijisay xakamaynta dhabta ah ee badi degaanka, oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn iyo kheyraadka dabiiciga ah. Qaramada Midoobay waxay tixgelinaysaa Booliiska Polisario inay noqdaan wakiilka sharciga ah ee dadka reer Srrawi, wuxuuna ku adkeeyaa in Sahrawisku xaq u leeyahay inuu iskiis u go'aamiyo.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saxaraha_Galbeed&oldid=228467"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Jannaayo 2022, marka ee eheed 19:25.